विद्यार्थीको लक्ष्यमा साथ::Hamro Koshi Awaj / awaz
विद्यार्थीको लक्ष्यमा साथ
शिक्षक-अभिभावक बालबालिकालाई बेलैमा निर्णय गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ
अमान्य अर्थमा निर्णय भन्नाले व्यक्तिको जीवनमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गर्नु हो । अर्थात् निर्णयले व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकासको लागि निकास प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । निर्णयलाई नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने एक असल गुणको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले हरेक व्यक्तिले सफलताको लागि यसको संवेदनशीलतालाई धेरै नजिकबाट बुझेको हुनुपर्छ र सानै उमेरदेखि निर्णय लिने बानी अनिवार्यरूपले बसाल्नुपर्छ ।
दैनिक जीवन सञ्चालनको लागि गरिने निर्णय हेर्दा जति सामान्य देखिन्छ । तर जीवनमा यसको प्रभाव भने ठीक उल्टो प्रकृतिको हुन्छ । जीवनलाई ठेस पुरयाउने गतिविधिहरू गर्दिनँ अर्थात् बेवास्ता गर्छु भन्नु पनि एक प्रकारको निर्णय नै हो । यस्तो प्रकारको निर्णयले व्यक्तिलाई असल बानीको विकास गर्न मद्दत गर्छ । जसले व्यक्तिमा आत्मविश्वास र भरोसा बढाउँछ ।
हरेक विद्यार्थी विभिन्न विषयवस्तु, व्यक्ति र घटनाको परिधीभित्र रहेको हुन्छ । यसै परिधीको बीचबाट उसले आवश्यक निर्णय गर्दै आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू नियमितरूपले सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि उसले कुनै पनि विषयवस्तु, व्यक्ति र घटनाको सम्बन्धमा निकास तथा विकासको लागि अनिवार्य दरिलो निर्णय गर्नैपर्छ । उक्त सम्बन्धमा विचार नपुरयाई हतारमा गर्ने निर्णय सम्भवतः फितलो किसिमको हुन्छ । जसले जवरजस्त उसको तन, मन र बुद्धिलाई विगतमा निर्णय गरिएका सम्बन्धित क्रियाकलापहरूप्रति तान्ने गर्छ । जसले वर्तमानको योजना कार्यान्वयनलाई नराम्ररी प्रभावित पार्न सक्छ ।
सामान्यतयाः शिक्षक तथा अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई व्यवहारिकरूपमा निर्णय गर्न सिकाउँदैनन् र त्यसको दुरगामी प्रभावबारे पनि बुझाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूले गलत निर्णय गर्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ । यदि गलत निर्णय भएमा यसले एकातर्फ उसमा भौतिक तथा मानसिक विचलनको स्थिति सिर्जना गर्ने तथा भएको आत्मविश्वासमा पनि ह्रास ल्याउने गर्छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान समयको महत्वलाई अर्थहीन बनाउँदै जीवनरूपी गाडीलाई नकारात्मक दिशातर्फ मोड्छ । जसले जीवनलाई सधैं बोझिलो बनाइराख्ने भएकोले अन्ततः यसले जीवनमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले रसिलो जीवनका लागि निर्णय र निर्णयको लागि ठूलो साहस गर्दा बेलैमा ध्यान पुरयाऔँ । अन्यथा उनीहरूले गरेको साहस दुष्साहसमा परिणत भई लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्माण गरिएको योजना कार्यान्वयनमा सङ्कट उत्पन्न हुन जान्छ ।
हरेक शिक्षक तथा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई ‘विगतलाई बिर्सिदेऊ र वर्तमानमा केन्द्रित हौ’ भन्दैमा उनीहरूको ध्यान वर्तमानमा केन्द्रित हुन सक्दैन । जबसम्म वर्तमानमा गरिने निर्णयको महत्व बोध हुँदैन तबसम्म उनीहरूमा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हैसियत तयार हुँदैन । अर्थात् ठूलो लक्ष्य प्राप्ति उसको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले हरेक शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई निर्णयको महत्व र यसको दुरगामी प्रभावको बारेमा स्पष्ट बोध गराउनु नै पर्छ ।
निर्णय गर्दा विद्यार्थीले विचार गर्नुपर्ने मुख्य आधारहरूः
क) निर्णय नै असल नेतृत्वको मुख्य गुण तथा सफलताको आधार भएकोले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जीवनमा दरिलो निर्णय अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
ख) कुनै पनि विषयवस्तु, व्यक्ति र घटनाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निर्णयका लागि उपयुक्त आधारसहितको विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै सो मध्ये उत्कृष्ट विकल्प छनौट गर्नुपर्छ ।
ग) फितलो निर्णयले वर्तमान समयको बन्ने ? तपाईमा भएको निर्णय क्षमतामा भर पर्छ ।
छ) निर्णय संवेदनशीलताको बोध भएको व्यक्तिले गर्ने निर्णय दरिलो हुन्छ र जीवनमा सफलता प्राप्त गरेको पाइन्छ ।
ज) दह्रो मनस्थिति निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिले नै परिस्थितिको सम्बन्धमा गर्ने निर्णय पनि ठोस प्रकृतिको हुन्छ ।
झ) निर्णयले दिशा निर्देश गर्दछ । त्यसैले निर्णय गर्दा भावनाको आधारमा होइन तर्कको आधारमा गर्नुपर्छ । अर्थात् प्रतिकुल परिस्थितिमा निर्णय कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।
ञ) बोकेको लक्ष्य कसको हो ? यस सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा दीर्घकालीन खुशी टाढा रहन सक्छ ।
हरेक व्यक्तिले दिनै जसो विभिन्न विषयको सम्बन्धमा निर्णय लिने गर्दछ । निर्णय चाहे साना हुन वा ठूला ती व्यक्तिको जीवन अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो जीवन कस्तो ? रसिलो कि बोझिलो बनाउने जिम्मा हाम्रै हातमा हुने भएकोले निर्णय गर्दा विचार पुरयाऔं । यसलाई नजरअन्दाज गर्दै नगरौं । अन्यथा हामीले गरेको गलत निर्णय हाम्रो लागि गलपासो बन्न सक्छ ।
निर्णय त्यस्तो शक्ति हो जसले व्यक्तिलाई दिशा निर्देश गर्छ । निर्णय गर्दा विद्यार्थीलाई आफूमाथि पूर्ण विश्वास र भरोसा दुवै हुनुपर्छ । निर्णयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ । उत्तेजित होइन संयमित भई तर्कको आधारमा परिणाममुखी निर्णय गर्नुपर्छ । अनि मात्र जीवन रसिलो बन्न सक्छ । त्यसैले यो कुरालाई हृदयबाटै मनन गरी हरेक शिक्षक तथा बुबाआमाले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई बेलैदेखि निर्णय गर्न सिकाऔं ।
(लेखकः प्रिन्सिपल हुन्)